ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရုရှားနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်မြို့(ရုရှား: Екатеринбу́рг, IPA: [jɪkətʲɪrʲɪnˈburk])သည် အီဆတ်မြစ်ကမ်းပေါ် ယူရယ်တောင်တန်း၏ အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ဆာဗျဲ့ဒ်လော့ဗ်စကီး အော့ဗလတ်၏ အုပ်ချုပ်မှုဗဟို ဖြစ်သည်။ ဒေသ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စက်မှုထွန်းကားရာ အဓိကနေရာဌာန ဖြစ်သော ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်မြို့သည် ဥရောပနှင့် အာရှတိုက်တို့၏ နယ်ခြားမျဉ်းကြား ယူရေးရှားတိုက်ငယ်၏ အလယ်တွင် တည်ရှိသော မြို့လည်းဖြစ်သည်။ ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်မြို့သည် မြို့ပြဧရိယာအရသာ စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းအထွန်းကားဆုံး မြို့များတွင် တတိယမြောက် အထွန်းကားဆုံးသော မြို့ဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံ၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ကိုဩဒိနိတ်: 56°50′N 60°35′E﻿ / ﻿56.833°N 60.583°E﻿ / 56.833; 60.583ကိုဩဒိနိတ်: 56°50′N 60°35′E﻿ / ﻿56.833°N 60.583°E﻿ / 56.833; 60.583
၁၇၂၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်
၄၉၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၉၁ စတုရန်းမိုင်)
၂၃၇ မီတာ (၇၇၈ ပေ)
လူဦးရေ (၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်း)
• ခန့်မှန်း (၂၀၁၇)
၂၇၀၀/km၂ (၇၁၀၀/sq mi)
ဩဂုတ်လ တတိယမြောက် စနေနေ့
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Law #30-OZ
↑ Haywood, A. J. (2010). Siberia: A Cultural History, Oxford University Press, p. 32
↑ Charter of Yekaterinburg, Article 24.1
↑ ၄.၀ ၄.၁ Official website of Yekaterinburg. Alexander Edmundovich Yakob, Head of Administration of the City of Yekaterinburg Archived 12 July 2015 at the Wayback Machine. (ရုရှား)
↑ Стратегический план развития Екатеринбурга до 2015 года. Раздел II. Исходные конкурентные возможности Екатеринбурга. Внутренние факторы развития города.။ 21 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Russian Federal State Statistics Service (2011)။ Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1 (in Russian)။ Всероссийская перепись населения 2010 года (2010 All-Russia Population Census)။ Federal State Statistics Service။ June 29, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Federal State Statistic Service။ Government of Russia (၂၀၁၇-၀၁-၀၁)။3July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ တမ်းပလိတ်:OKATO reference
↑ ၉.၀ ၉.၁ Law #85-OZ
↑ Об исчислении времени (in Russian) (3 June 2011)။ 19 January 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Ekaterinburg.com. General Information Archived 21 January 2013 at Archive.is
↑ English version - Информационный портал Екатеринбурга
↑ Registrant WHOIS contact information verification | Namecheap.com
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်မြို့&oldid=737247" မှ ရယူရန်
၁၀ မတ် ၂၀၂၂၊ ၂၁:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ မတ် ၂၀၂၂၊ ၂၁:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။